सेक्सका लागि दिमागका विभिन्न भाग होइन एउटै विशिष्ट भाग जिम्मेवार – Mission
हालसम्म यौन सम्बन्ध राख्नका लागि दिमागको विभिन्न भागले काम गर्छन् भन्ने मान्यता थियो ।
तर, अब यो मान्यता पुरानो भएको छ । एक वैज्ञानिक अध्ययनका अनुसार मानिस तथा मुसामा दिमागको एउटा भागले मात्रै यौन सम्बन्ध बनाउने वा नबनाउने निर्णय गर्छ । यसैका आधारमा पोथीमा प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) तथा एस्ट्रोजेन (Estrogen) हर्मोन्स निस्कने तय हुन्छ ।
सुसाना लिमाका अनुसार कोही महिला तथा पुरुष एक अर्कासँगको यौन सम्बन्ध स्वीकार गर्छन वा गर्दैनन् भन्ने कुरा दिमागको यसै भागले निर्धारण गर्छ ।
पोथी मुसाले भने ६ दिनमा आफ्नो ‘सेक्स पार्टनर’ यथावत राख्ने वा छोड्ने निर्णय गर्छ । यी दुई हार्मोन्सले मुसालाई यति छिट्टै यस्तो उग्र फैसला लिन प्रेरित गर्ने कुरामा वैज्ञानिकहरु हैरान बनेका छन ।
सुसाना लिमा भन्छिन, यस अनुसन्धानबाट प्राप्त जानकारीअनुसार पोथीलाई यौन सम्बन्ध स्वीकार गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउने दिमागको एउटा हिस्सा ‘वेन्ट्रोमेडिएल हाइपोथ्यालामस’ (Ventromedial Hypothalamus – VMH) रहेको हुन्छ ।
यसभित्र पनि कैयौं कम्पार्टमेण्ट बनेका हुन्छन् । हरेक कम्पार्टमेण्टमा ‘न्युरोनस’ हुन्छन् । यिनले पोथीको प्रजनन क्षमता निर्धारण गर्नुका साथै यौन सम्बन्ध स्वीकार्यतालाई सक्रिय बनाउँछन् ।
सुसानाको अध्ययन २० अप्रिलको ‘इन्यूरो’ (eNeuro ) जर्नलमा प्रकाशित भएको छ । यसमा यो बताइएको छ कि ‘वेन्ट्रोमेडिएल हाइपोथ्यालामस ‘ (भिएमएच) भित्र कस्ता प्रकारका कर्माटमेन्ट्स हुन्छन् ?
यसले कसरी पोथीलाई यौन सम्बन्ध स्वीकार गर्नका लागि तयार गर्छ ? साथै यसले नै यौन व्यवहारलाई निर्धारित गर्छ भन्ने जानकारी दिइएको छ ।
सुसानासँग काम गर्ने पिएचडी शोधार्थी इन्स डियान्सका अनुसार पोथीमा प्रजनन चक्रका दौरान ‘भिएमएच’का ‘न्युरोन’ लगातार परिवर्तित भइरहन्छन । ‘भिएमएच’ को मुख्यतया तीनवटा कम्पार्टमेण्ट हुन्छ ।
यी कम्पार्टमेण्टमा रहेका ‘न्युरोन’ ले नै ‘प्राजेस्टेरोन’ हार्मोनलाई स्वीकार गर्ने गर्छन् । ‘न्युरोन’ को रवैया हरेक कम्पार्टमेण्टमा बदलिरहेको हुन्छ । यसले भिन्न भिन्न तरिकाले काम गर्छ । यहाँसम्म कि यौन स्वीकार्यताको फैसलालाई समेत ‘न्युरोन’ ले बद्लिन सक्छ ।
अध्ययनबाट यो कुरा स्पष्ट भएको छ कि प्रजननसँग जोडिएका हार्मोन्सको दिमागी सक्रियतासँग सीधा सम्बन्ध हुन्छ । साथै प्रजनन तथा यौन इच्छाका लागि दिमागको एउटै मात्र भाग उत्तरदायी रहेको हुन्छ ।
यस अध्ययनबाट भविष्यमा वैज्ञानिकलाई विभिन्न थप कुराको जानकारी पाउन सजिलो हुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, असार २, २०७८ 1:50:34 PM |
Prevहर्षवर्धनले प्रेम खुलासा गरिदिएपछि रिसाइन् कट्रिना
Nextबागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा अझै एक/दुई दिन भारी वर्षा हुने